ललितपुरमा किक बक्सिङकाे भब्य तयारी शुरू, देशभरिका खेल प्रेमीकाे ध्यान तानियाे - Dainik Nepal
ललितपुरमा किक बक्सिङकाे भब्य तयारी शुरू, देशभरिका खेल प्रेमीकाे ध्यान तानियाे
दैनिक नेपाल २०७६ पुष २२ गते ८:४६
ललितपुर, २२ पुस । ललितपुर जिल्लाको चापागाउँमा हुने गणेशमान सिंह तेस्रो खुल्ला राष्ट्रिय किक बक्सिङ प्रतियोगिताको धमाधम तयारी शुरु भएको छ ।
तयारी समितिका संयोजक मीनकृष्ण महर्जनका अनुसार किक बक्सिङको तयारी स्वरुप गेट बनाउने, मञ्च बनाउने, खेलाडीको तौल परीक्षण लगायतका कामहरू धमाधम भइरहेका छन् ।
‘समय अत्यन्तै कम छ’, उनले भने, ‘प्रतियोगितालाई भव्य र सभ्य बनाउनका लागि प्राविधिक तयारीहरू भइरहेका छन् ।’
पुस २८ र २९ गते लगनखेल डोजोमा बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म खेलाडीको तौल परीक्षण हुनेछ ।
नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका विभागीय टिमसहित देशभरिबाट झण्डै दुई सय खेलाडीले भाग लिने अपेक्षा आयोजकको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सर्वमान्य नेता लौह पुरुष वीर गणेशमान सिंहको सम्झनामा माघ २, ३ र ४ गते ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकास्थित चापागाउँको प्याङगाउँचौरमा ‘गणेशमान सिंह तेस्रो खुल्ला राष्ट्रिय किक बक्सिङ प्रतियोगिता’ हुँदै छ ।
ललितपुर किक बक्सिङ जिल्ला कार्यसमितिको आयोजनामा तीन वर्षदेखि लगातार यो प्रतियोगिता हुँदै आएको छ । विजेता खेलाडीहरूलाई आकर्षक नगद पुरस्कार र मेडलको व्यवस्था भएकाले पनि गणेशमान सिंह किक बक्सिङ प्रतियोगितालाई खेलाडीहरूले विशेषमा लिने गरेका छन् ।
प्रतियोगिताको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नेछन् । समापन र पुरस्कार वितरण भने नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले गर्ने कार्यक्रम रहेको संयोजक महर्जनले जानकारी दिएका छन् ।
उक्त प्रतियोगितामा प्रथम हुने खेलाडीलाई रु. ३० हजार, द्वितीय हुने खेलाडीलाई रु. १५ हजार, तृतीय हुने खेलाडीलाई रु. ८–८ हजार नगद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।
सहभागी टिमलाई ब्रेकफास्ट र लञ्चको व्यवस्था गरिएको प्रतियोगिता आयोजक समितिका संयोजक महर्जनले बताए । उपत्यका बाहिरका खेलाडीहरूलाई खाना र वसोवासको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।